Daawooyinka dabiiciga ah ee Archives - WAAJIBAATADA
beauty Caadooyinka wanaagsan Miisaanka waayayaa rasiidhada Galmada iyo xiriirada daryeelka
Lesotho, hormuud ka ah daroogada cannabis, xaalada Waqooyiga Afrika
Sannadkii 2017, xashiishka caafimaadka waxaa laga sharciyeeyay Lesotho, boqortooyo yar oo ku taal Koonfur Afrika. Tan iyo markaas, warshadani waxay u kacday darajada runta "dahab cagaaran", oo aan la dafiri karin waxna ku kordhineysa guud ahaan dhaqaalaha dalka. ...
Sidee looga takhalusaa urka siilka si dabiici ah 4-tillaabo?
Chinde Juun 13, 2020 0
Mabda 'ahaan, xitaa caafimaadka wanaagsan, xubinta taranka haweenka wali waxay leeyihiin ur yar. Si kastaba ha noqotee haddii urtan aad ka aragto mid ka xoog badan ama aan fiicnayn, waxay noqon kartaa dhibaato caafimaad gaar ahaan haddii urta ay la socdaan kuwo kale ...